IGnome 3.34 iyatholakala, yazi izindaba zenguqulo entsha | Kusuka kuLinux
Ngemuva kwezinyanga eziyisithupha zentuthuko, lapho beveze okuncane mayelana nezinguquko nezindaba zenguqulo entsha yemvelo yedeskithophu yeGnome, inguqulo entsha "iGnome 3.34" ikhishwe ezinsukwini ezimbalwa ezedlule. Uma kuqhathaniswa nokukhishwa kwangaphambilini, kwenziwe izinguquko ezungeze izinkulungwane ezingama-24, ekusetshenzisweni kwazo onjiniyela abangama-777 ababambe iqhaza obesebenza ezingxenyeni ezahlukahlukene zemvelo yedeskithophu.
Ngokufika kwale nguqulo entsha yemvelo yedeskithophu yeGnome 3.34 wezinto ezintsha ezisemqoka lokho kugqame enye yazo yikhono lokusebenzisa ngokwethukela ukwethulwa kweXWayland kumphathi wewindi le-Mutter lapho uzama ukusebenzisa uhlelo lokusebenza ngokuya ngomthetho olandelwayo we-X11 endaweni yokuqhafaza esuselwa kuphrothokholi yeWayland
Umehluko ekuziphatheni kwezinguqulo zangaphambilini ze-Gnome ukuthi ngaphambi kokuthi ingxenye yeXWayland isebenze njalo futhi idinga ukwethulwa kwangaphambilini okucacile (okuqale ngesikhathi sokuqala kweGnome) futhi manje kuzoqala ngamandla lapho izingxenye zidingeka ukuqinisekisa ukuhambisana kweX11 .
Uhlobo olusha lweMutter libuye lungeze ukusekelwa komsebenzi omusha we-KMS APIl (Atomic) (Amasethingi Emodi Yesimo se-Atomic) ukushintsha izindlela zamavidiyo, kukuvumela ukuthi uhlole ukunemba kwamapharamitha ngaphambi kokushintsha isimo sehadiwe ngasikhathi sinye, futhi uma kunesidingo, buyisela ushintsho.
Yini okusha in Gnome 3.34
Amabhokisi eGnome manje asebenzisa amabhokisi engxoxo ahlukene lapho ungeza ukuxhumana okukude noma isilawuli sangaphandle. Lapho kwakhiwa imishini emisha yasendaweni, ingxoxo yokukhethwa kwefonti ihlukaniswe izigaba ezintathu: Amafonti atholakele, ukulandwa kwezintandokazi, nokukhethwa kwefonti.
Imodi yokufaka yeWindows Express ishintshiwe ukuze kusetshenziswe isithombe se-iso I-CD-ROM esikhundleni sesithombe se-floppy. Kungezwe ukusekelwa kokulayisha umshini obonakalayo okhona kusuka esithombeni se-CD / DVD okunamathiselwe (ngokwesibonelo, ukuqala indawo yokubuyiselwa kwezinhlekelele). Inketho yokunika amandla / ukukhubaza ukushesha kwe-3D ingezwe kuzakhiwo zemishini ebonakalayo.
Ngemodi yokubuka konke, bekungenzeka ukuqoqa izithonjana zohlelo lokusebenza kumafolda. Ukwakha ifolda entsha, mane uhudulele isithonjana esisodwa kwesinye. Uma kungekho zimpawu ezisele eqenjini, ifolda isuswa nge-othomathikhi.
Isitayela semodi yokubuka konke sibuyekeziwe, kufaka phakathi idizayini entsha yebha yokusesha, inkambu yokufaka iphasiwedi, nemingcele yewindi
Epiphany (I-Gnome Web) manje kufaka ukuhlukaniswa kwe-sandbox kokucutshungulwa kokuqukethwe kwewebhu ngephutha. Abalawuli manje bakhawulelwe kuphela ngokufinyelela kwizikhombisi ezidingekayo ukuze isiphequluli sisebenze. Kungezwe ikhono lokuphina amathebhu (ukuphina ukuqhuma).
I-block blocker ibuyekeziwe, manje esebenzisa amathuluzi wokuhlunga okuqukethwe ahlinzekwa yi-WebKit. Ukuhlelwa kwekhasi elifingqiwe, elivula kuthebhu entsha, kuvuselelwe. Umsebenzi wokusebenzisela amadivayisi weselula.
IGNOME Music ingeze ukulandela ngomthombo, njengesiqondisi Somculo esihlahleni sasekhaya, ukuthola amafayela amasha noma aguquliwe kuwo bese ubuyekeza iqoqo ngokuzenzakalela. Ingxenye eyisisekelo yesicelo ibhalwe kabusha kakhulue, okwenze ukuthi kube lula ukusebenzisa imodi yokudlala engapheli phakathi kwamathrekhi we-albhamu. Kubuyekezwe ukwakheka kwekhasi ngohlu lwadlalwayo, i-albhamu nolwazi olumayelana nomculi
Ku-configurator, kwethulwa iphaneli lokukhetha iphepha lodonga kabusha, lapho kungenzeka ukuthi ubuke kuqala amaphephadonga akhethiwe kudeskithophu nakuhlelo lokukhiya isikrini. Kungezwe inkinobho entsha ye- "Faka isithombe ..." ukwengeza izithombe zakho njengephepha lodonga.
Ku-Sysprof, ithuluzi lokuphrinta ukusebenza kohlelo, isikhombimsebenzisi sakhiwe kabusha futhi inqubo yokuphrinta yenziwa lula kakhulu. Ihlanganiswe ne-GJS, i-GTK ne-Mutter. Kwengezwe eminye imithombo yedatha, kufaka phakathi amandla wokuqapha ukusetshenziswa kwamandla.
Uma ufuna ukwazi okwengeziwe ngalokhu kwethulwa ungakwazi hlola isixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » IGnome 3.34 iyatholakala, yazi ukuthi yini okusha kunguqulo entsha